Nepali Rajneeti | पशुको दिसाबाट कफी !
कार्तिक १६, २०७८ मंगलबार ५३ पटक हेरिएको
विश्वमा कफी पारखिको कमी छैन । कफीको स्वाद र सेवनपछि पाउने पुर्नताजगीले मानिसलाई कफी पिउन प्रेरित गर्दछ ।
त्यसैले मानिसहरु मंहगो मुल्य तिरेर भएपनि कफी पिउने गर्दछन् । तर एउटा सामान्य कफीको कति मुल्य पर्ला रु बढिमा एकहजार रु
विश्वको सबैभन्दा महंगो कफी कोपी लुवाक हो । जसको मुल्य करीब साढे ११ हजार पर्दछ । यो कफी सिवेट नामक पशुको दिसाबाट तयार पारिन्छ । अमेरिका यसको एक कपको मुल्य लगभग १० हजार पर्दछ । त्यहाबाट बाहिर यसको निर्यात हुदाँ यसको मुल्य झन् बढ्दछ ।
यो कफी बनाउन यसलाई बिरालो जस्तो पशुको दिसाबाट तयार पारिन्छ । सिवेट नामक बिरालो जस्तै एक प्रजातीको पशुले कफीको अधकल्चो (पुरा नपाकेको) बिउ खाने गर्दछ । सिवेटले यसको गुदी पचाएपनि पाचक एन्जाइम्सको कमीले कफीको गेडा पचाउन सक्दैन । जसका कारण त्यसको दिसामा यो सहजै बाहिर निस्किन्छ ।
यसरी सिवेटले खाएर दिसामा निस्किएको कफीको गेडालाई सफा गरिन्छ । त्यसपछि यसलाई किटाणुरहित पारेर भुटिन्छ र कफी तयार पारिन्छ । यसरी सिवेटको पेटमा रहदाँ कफी अझ गुणस्तरीय र पौष्टिक हुन पुग्दछ । सोहि कारणले यसको मुल्य महंगो पर्दछ । यो खबर साभार गरियको हो ।
विवाहित महिलाप्रति किन आ’क’र्षित हुन्छन् पुरुष ? यस्तो छ कारण !
यो गाउँमा ९ वर्षदेखि छोरा नै जन्मिएनन्, त्यसपछी गरियो यस्तो अचम्मको घोषणा !
मासिक २५ हजार मात्र तिर्न सक्नुहुन्छ भने चढ्नुहोस् निसान म्याग्नाइट लग्जरी कार !
आखिर किन साधुहरू पहेँलो रंगको बस्त्र लगाउने गर्छन् ? यस्तो छ कारण
बिहे गर्छन् तर यौ’नस’म्ब’न्ध राख्दैनन्, विवाहित दम्पतीको व्यवहारले सरकारलाई सं’क’ट